အမူးသမား..၁၁..ပါး..အများ..သိစေအပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အမူးသမား..၁၁..ပါး..အများ..သိစေအပ်
Posted by Good Idea on Aug 20, 2011 in Aha! Jokes, Satire | 18 comments
* ၁) ခွေးမူး…. မူးလာသည်နှင့် အခြားသူများကို ဒေါသထွက်ကာ ရန်ရှာတတ်သူ * ၂) ဆ်ိတ်မူး….. တွေ့သမျှ စားစရာများ အမြည်းများကို တယောက်တည်း ဒိုင်ခံ အားပေးသူ * ၃) ကြက်မူး…. ရေချိန်မှန်လာလျှင် မိန်းကလေးများကိုသာ စိတ်ဝင်စားတော့သူ * ၄) မျောက်မူး….ခုန်ချင်ပေါက်ချင် ကချင်လာသူ * ၅) ၀က်မူး….တွေ့ရာနေရာတွင် ထိုးအိပ်တတ်သူ * ၆) ဆက်ရက်မူး….. အဆက်မပြတ် တော်ကီလွှတ်သောသူ * ၇) တောက်တဲ့မူး…..ခွါမရတော့အောင် ကပ်ရစ်၍ တိုင်ပတ်သောသူ * ၈) နွားမူး….မူးလာလျှင် ချည်တိုင်ကို သတိရ၍ ပြန်ရန်ပြင်တတ်သူ * ၉) ဖွတ်မူးပုတတ်မူး…. အမူးပြေသွားလျှင် မူးနေစဉ် လုပ်သည်များကို ဘာမျှမမှတ်မိဟု ပြောတတ်သူ * ၁၀) မြွေမူး… မည်မျှသောက်သောက် တွင်းဝင်ဖြောင့်သူ ( လုပ်စရာရှိသည်များကို မမှားဘဲလုပ် နိုင်သူဟု ဆိုလိုသည် * ၁၁) သာလိကာမူး… နှစ်ပက်လောက်သောက်ပြီးတိုင်း ငါမူးနေပြီကွ ဟု အမြဲပြောတတ်သူ ကဲ ရွာသားများ ဘယ်လိုအမျိုးအစားထဲမှာ ကိုယ်ပါနေသလဲ စမ်းစစ်ကြည့်နိုင်ပါ၏။ (သူငယ်ချင်းပြည့်စုံ၏ Facebook စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
ဘယ်အမျိုးအစားထဲပါလဲ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်းမူးထဲ ပါသွားပါသည်။
မသောက်ဖူးတော့ မမူးဖူးဘူး ..
ဒါပေမယ့် ဖတ်လိုက်လို့ မူးသွားတယ် .. အဲဒါ ဘယ်အထဲမှာ ပါသွားလဲ မသိတော့ဘူး ……….
အမူး ဋီကာ ချဲ့ လိုက်တာ တော်တော် များတာပဲ.. တခါမှ မသောက်ဖူးဖူး။
ခေါင်းမူးရင်တော့ တလောကလုံး ချာချာလည်သလို မူးတာပဲ
ရခိုင်လို ပြောတာကတော့ကြွက်တွင်း တဲ့ ဘယ်လောက်သောက်သောက် မမူးပါဘူးတဲ့ ဟိ ဟိ
ကျုပ်ကတော့… မူးပြီး…သတိလက်လွတ်ဖြစ်တဲ့အထိကို.. မသောက်ဖူး..။
ဇိမ်ကျပြီး.. လူသားဖြစ်ရတဲ့အရသာကို.. အတိုင်းအတာနဲ့..ခံစားနိုင်တဲ့နေရာမှာတင်..ရပ်ထားတယ်..။
အသက်ပြည့်ပြီး..သောက်နိုင်ရက်သားနဲ့.. မသောက်ဖူးတဲ့သူတွေကို.. သနားတယ်.။
ဆိတ်မူး ဖြစ်ရတာ ဗိုက်ဝတယ်
ငါးမူး – ပြားငါးဆယ်၊ တကျပ်၏တဝက်
တမူး – မြို့နယ်အမည်
သောက်ပြီးရင်တော့ ခုပြောတဲ့အထဲက တစ်ချက်နဲ့မှ မငြိပေါင်ဗျာ
ရီဝေေ၀လေးဖြစ်နေတာကို ဇိမ်ခံပြီး သူ့အကြောင်းကို တစ်စိမ့်စိမ့်ထိုင်တွေးပြီး ကြည်နူးနေတတ်တာပဲရှိတယ်
သိတယ်မလား… ” အချစ်ဆုံးသာ ကိုယ့်အနားရှိစေချင် ” နေတော့လည်း…
ကိုရှုံး က ဒါဆိုကြက်မူးထဲမှာပါတယ်လေဗျာ..
ဟာဗျာ.. ကြက် နဲ့မဆိုင်တာကို.. ဘီလူးပြောမှပဲ ကျွန်တော်က ကြက်ကြီးကို တမ်းတနေသလိုဖြစ်တယ်…း(((((
ကျွန်တော်က တော့ အပြင်မှာသောက်ရင် နွားမူး…မူးတော့တာပဲ
အိမ်မှာသောက်ရင်တော့ ၀က်မူး မူးပြီးထိုးအိပ်တော့တာပဲ
ဘယ်မူးထဲ ကိုယ်ပါနေလဲသိဘူး …တစ်ခါတစ်ရံတော့ ပါကောင်းပါလိမ့်မယ်
မျောက်မူး များဖြစ်မလား ခုန်ချင်ကချင်တာတော့ဟုတ်ဘူး သီချင်းဆိုချင်တာ…:D
ွgrand royal .. grand royal အာဇာနည်ဆိုတာ ပြောပါတယ်…
လင်မယားချင်ရန်ဖြစ်ရင်. ရန်ဖြစ်သံကြားဖူးတယ်..။ မိန်းမကဘယ်လိုဆဲတယ်မှတ်လဲ သူ့လင်အရက်သမားကို……. မအေရိုး……ခွေးမသောက်တဲ့ အရည်တွေသောက် ပြီး ခွေလိုး မူးလာပြီး ထမင်းစားဆိုတော့မစား ပြီးတော့လူပေါ်ပဲ ခွခွပြီး စီးနေ…။ တဲ့………လေ ….အဲ သူက အခြားသူရန်မရှာဘူး သူ့မိန်းမပဲရန်ရှာတာ …။
(၁၂) မိုက်ခဲမူး… မူးလာရင်ကာရာအိုကေသွားချင်သူ (ကြက်မူးထဲတွင်မပါပါ)မိုက်ခဲနေရရင်ကျေနပ်နေသူ (၁၃)သူကြီးမူး(အမူးပါး)… ဘေလာလျှင်ဘေစာရွက်အားရွာသားများအားအမိန့်စာကဲ့သို့ ကမ်းပေးသူ(သို့ မဟုတ်)ရှူးထပေါက်သူ(ရွာထဲကဒဂျီးမပါပါ) (၁၄)…….(၁၅)…….ဟိုက်မဟေသီလာနေပြီး.. ဒါပဲနော်……….
ကျန်အမှုူးတွေကတော့ ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ (၃)ကကြတော့ ကြက်မူး…. ရေချိန်မှန်လာလျှင် မိန်းကလေးများကိုသာ စိတ်ဝင်စားတော့သူ ။ ဆိုတာ
ကြက်ကမိန်းကလေးတွေစိတ်ဝင်စားလို့လား ကြက်လဲ အစာကောက်တာပဲလေ ဆိတ်လိုပဲ ဟုတ်ဘူးလား